Duula Fuula Lamaa – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooDuula Fuula Lamaa
Damee Boruu: Ebla 15, 2018
TPLF bayyaanatee akka nu dhabamsiiftu ayyaa laachuuf taha. Duula fuula lamaan Qabsoo Bilisummaa Saba Oromoo dhaamsuu humna sadarkaa ol aanaan deemaa bareechinee hubachuun qabsoo keenya duwwaa utuu hin taane jireenyumma Saba Oromoo iyyuu badii jalaa olshuuf nu gargaara. Haalli deemaa jiru baayyee kan nama yaadessu dha. Karaa tokko sababa Labsii Yaroo Mudamaan waraanni uummata keenya irra qubatee ilmaan Oromoo akka bineesaa adamsee ajjeesaa fi mana hidhaa keessatti ukkamsee daruu hojii ganamaa fi galgalaa godhatee jira. Karaa biraa ilmaan Oromoo warri TPLF aanan obaafee, dhadhaa nyaachiftee fi afaan barsiiftee guddifatee uummata keenya burjaajessuu hojii isaanii isa duraa godhatanii jiru.
Kan adda baafnee hubachuu dadhabne tokko garee Lammaa (Team Lammaa) qabsoo Saba Oromoo keessaan booressuuf kan itti yaadamee tilmaaman qinda’e malee tasa qabsoo bilisummaa uummata keenya keessaa kan dhalate akka hin taane dha. Qabsoo Uummatni Oromoo oofaa jiru ajjeechaa fi hidhaan dhaabuu akka hin dandeenye yaroo hubattu TPLF yaada keessaan diigu hojii isa duraa godhatte. Akka namoonni keessa hojii TPLF jedhan yoo tahe Dr. Abiyi Ahmed waggaa lama dura kan Mumicha Ministraa tahee mudame. Sadarka ministeerumaa faderaala irraa aangoo tokko malee gadi bu’ee akka Obbo Lammaa gargaaru godhame.
Erga gareen Lammaa dhaabbatee amma Dr. Abiyi Mumicha Ministeeraa tahee ifatti mudamuutti kan dho’ataa turrre drama TPLF malee waanti biraa hin turre. Meeshaa TPLF kan tahe EPRDF keessa garaagrummaan tokko illee hin jiru. Akteeroonni (actors) jiru Obbo Daguu fi Obbo Lammaan warra ifatti mulatani. Olola dabrsachuu yaroo barbaadu TPLF OMN fi Ethsat oduu xiqqoo qiciif. Isaan immoo Oduu Amma Miliqee nu gahe jedhanii bakka sodomatti falaxxanii uummata burjaajjessaa bahan. Oduu isaanii kanan qabsoon uummata keessattii fi lafa irratti tahuun hafe qabsoon gara facebook itti galte. Dr. Abiyi aangoo Mumich Ministeerumaa caccabsee dorgomiin waan moo’ee fakkeessuuf yaalii guddatu tahe. Nama baayyee illee fujjeesssee jira.
Mee caccabsee moo’ee jira haa jennu. Maal gochhuuf deema ? Maalis gochuu danda’a? Maalli gochaas jira? Haayile Mariyaam Dasalenyi ,“haasaan kee nama kaasaa hin jiru kitaaba hin dubbistuu” jedhamee qeeqamaa akka ture ni yaadanna. Karaa biraa Dr. Abiyi afaan baayyeen haasaa bareedaa akka gochaa jiru yaroo gabaaba kana keessatti argaa jirra. Namni haasaa bareedaa dhaga’uu jibbus hin jiru. Haasaan godhamu kun gara kam akka deemaa jiru waan argaa jirru natti fakkaata. Baasiin barbaachisu kamuu bahee mootummaa EPRDF kufaatii irraa hanbisuu dha. Mootummaa EPRDF hanbisuu jechuun TPLF hanbisuu dha. Dr. Abiyi kaabinee mataa isaa iyyuu dhaabbachaa hin jiru. Rakkinni biyyaa sanaa, sirnaa fi Mootummaa biyya bulchu utuu hin namicha Haayile Mariyaam Dasaaleyni tahuu isaa ti. Nama barcuma MM irra taa’uu jijjiruun waan rakkinni biyya sanaa hiikame fakkaata.
Ammaa TPLF jirutti biyyaa Impaayeera Itoophiyyaa keessatti tolaanis tahe lolan humni mootummaa qabachuu danda’u hin jiru. Jiraachuufis hin deemu. Tooftaa amma ittiin deemtu kun yoo milkaa’eef akkuma jettu TPLF biyya sana waggaa dhiba ol bituuf deemti. TPLF duute yaroo jennu akka bofaa biyyoo araabdee lafaa kaati. Warri jabina diina keenyaa hin kaasiin jedhee natti dalanus ni jiru. Garuu waan aggaruu irraa dubbachuun hammeenya hin qabu.
Obbo Lammaa fi Dr. Abiyi Magaala Amboo gaafa deeman har’a “misiraachoo fidnee dhufunee “ jedhan. Misiraachoon uummata keenya gammachise maal? Dr. Abiyi gaafa muudame an ilma Oromoo jedhee illee maqaa abbaa isaa kaasuu hin feene. Kana malee nama Minilkiin faarsuu akkeeka Miniliki bakkaan gahuuf dhaadatuuf uummatni gammachuu maalii qabaa? Uummatni Oromoo hammeenya Miniliki malee garumaa Miniliki hin beeku. Eeyyee namni Oromoo tokko mataa biyyaa yoo tahe namatti tola. Mumicha Ministeeraa tahuun gaaffii Uummata Oromoos hin turre. Gaaffii Uummata Oromoofis deebii hint ahu.
Yoo dhugaa isaa gad fageessinee illee komandi poostiin uummata keenya irra qubatee uummata keenya bahaa fi galii duwwaa jira. Ilmaan Oromoo kumaatama hedduun mana hidhaa keessatti dararama jiru. Kan ajjeesamu , kan mana hidhaatti darbamu, kana achi buteen isaa dhabamu, kan tumamee qaamni isaa irraa hir’atu lakkobsa hin qabu. Warra ilmaan isaanii irraa ajjeefaman, qaamni irraa hir’atee fi umurii isaanii guutuu badii tokko malee mana hidhaa keessatti dabarsaniif utuu beenyaan tokko hin laatamiiniif misiraachoo maal uummatni keenya dhaga’a?
Haayile Mariyam Dasaaleeyni akka lamaffaa keessa hin deebinetti warra farra nagaa tahan kana hin barbadeessina jedhee ture. Ilmaan Oromoo kumaataman lakkawwaman ajjeessuu fi hidhuun qabsoo uummata Oromoo dhaamsuu dadhabe. Qeerroo Bilisumaa Oromoos ni qoranna jedhaanii itti dhadachaa turan. Hunduu tokko lamaan harkatti fashale. Gara ijibaata fuula lamaffaa darban. Karaa duubaa humnaan fixxaa karaa fuula duraa qeerroo fakkaatanii waan qeerroon dhaabbateef waan dhaabbatan fakkaatanii keessa galanii akka qinqanii nyaachuu dha. Maaliif namoonni jajjaboon akka Goobanaa Daacii Miniliki bukkee dhaabbatanii uummata isaanii cabsu filatan yoo jenne of gaafanne ayyaan ilaallattuu waan tahaniif deebiin jedhu gahaa miti. Akkuma kana Obbo Lammaa fi Dr.Abiyi tarii garaadhuma isaanii guutuu EPRDF waan bareedaa hojjechaa jira jedhanii itti amanu taha. Kanaafuu cinqiin Uummatni Oromoo keessa jiru waan isanitti dhaga’amu natti hin fakkaatu.
Qeerroon Bilisummaa Oromoo, Waraanni Bilisummaa Oromoo fi Ummatni Oromoo Fincila Xumura Garbummaa daran finisuu malee filmaata biraa hin qabnu. Warra kana abdannee fi ammannee taa’uun ykn yaroo keenuuffiin.
Qabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira? Kutaa Saglaffaa
የኦሮሞ የነፃነት ትግል ከየት ተነስቶ ወዴት እየሄደ ነው? ክፍል ዘጠኝ